Sawiro:- Dad ku dhaawacmay Muxaadaro uu maanta muqdisho ka jeedinayay wadaadka caanka ah ee Sh.Keenyaawi.
January 11, 2019 marqaan Somalia, Wararka Maanta 4
3 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen Kulan Muxaadaro diini ah oo Sheekh Kenyaawi uu ku qabanaayay Hoolka Sahal oo ku yaalla Agagaarka Garoonka Aadan Cadde.
Askari ka tirsan Ciidanka dowladda ayaa xabado furay ka dib markii uu buuxsamay Hoolka ay ka socotay Kulanka Muxaadaradda ah, waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 3 qof sidda ay radio vos u xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Boqolaal qof ayaa xaadiray kulanka, waxaana sidoo kale banaanka dhooban Boqolaal kale, maadaama goobta ay tahay mid aan qaadin.
Dadka reer koonfur soomaaliya illaa waxay waayeen cid wacdida oo u aqrida Diinta Ilaahay (swt).Wa dad meel lagu haysto oo lagala daalay Bom,Isbaaro,baarasho.bililiqo iyo kufsi.Shacabka xamar waa dad muslimiin ah oo jecel Diintooda ee Diintii baaba lagu diraa oo lagu dilaa.
Ummad hadday diyaar u tahay in ay Tartan u gasho sharka oo dhan hadana dhinaca kale u tartanto muxaadaro diimeed waa shay cajiib ah.
Muqdisho ninkaad tiraahdid qof baan raba in aan dilo wuxu ku oranaya IMISAAD BIXINAYSA. qof oranaya war dhiig islaameed ma fiicne dawladda ayaan kuu soo sheegaya ma jirto.
Dadkan Muxaadaradda safka ugu jira haddii la weydiiyo Yaa qaadanaya $1000 oo qof iso dili kara kuligood waxay oran lahaayeen DIYAAR BAANI NAHAY.
Beesha USC waxay ka dhinteen Qalbiga iyo caqliga sababtuna waxay tahay hoos ka akhriso
Nin Guri Xaaraan ku haysta ayaa guriga dhexdiisa ku tukada oo weliba caruurtiisa quraanka ku bara oo weliba Ramadaanka ku sooma, Qaar weliba dadki laha guriga intey dileen ayey ku aaseen ama Daarada guriga ama guriga hortiisa ama guriga dabadiisa.
Kuligood GAR CAS bay wada leeyihiin wadaadna wey u egyihoiin,Tusbaxna wey sitaa dikriga ilaahayna afkooda wuu ka soo baxaya………… Dadka Noocaas ah Maxaad ku magcaabi lahayd.
Shiikh indha cade dadka ayu xajka geeyaa oo lacag ku qaataa wuxu degan yahay Guri weyn oo xaaraan ah,shabeeladda hoose Biyaha wabiga ayu dadka ka iibin jirey BAL KA SHEEKEEYA DADKA NOOCAAS AH masaajidkana safka hore wey kaaga hormaraayaan bal dadkaas noocaas ah Quraanka aya lagu sheegay in ay yihiin EHLU NAAAAAAAAAAAAAAAR.
Horta beeshoo dhan dambiile ma wada aha,laakiin midbaan shaki ku jirin oo ah dadkii qaan gaarka ahaa waagii ay dadka cuni jireen most of them raali bay ka ahaayeen dhibaatooyinkii ay suubiyeen.Intaan maqlay labo nin baa yiri war waxaad wadaan xaq iyo sharci midna ma aha.Labadii nin mid markiiba way dileen.Kii kalena uk buu joogaa oo dil bay la raadinayaan.
Dab La Ridayoow nin baa sheegay sheeko cajiiba.
Waxuu yiri waxaan meel ka wada shaqayn jirey nin ay isku reer yahiin Cabdiqasim Salaad.Waxuu yiri ninkii mar dambaan shaqada ka waayey.muduu maqnaa.Waa dambuu soo noqday oo uu shaqadii yimid.Ninkii is waraysanay oo waxaan ku iri war xaggee baad aaday oo ad intaas ku maqnayd?Suuye soomaaliya.Hayeh,oo mudaad maqnayde.Suuye nin yahoow haah oo waxaan ku daahay gacansi baan ku jirey.Oo gacansigii hadda ma so dhammaysay?Suuye haah.Waxuuu ku yiri ma huteel baa?Suuye maya.Ma import and export miyaa?Suuye waa gacansi kaloo lacag badan iiga baxday.Ma maqaasiinaad soo furatay?War waxaas oo dhan ma aha.Ma beeraad soo gadatay.War mayee waa ISBAARO.Maxaad tiri?Waa isbaaro baan ku iri.Isbaaro ,aa?War haah.Oo meeqaad ka bixisay?Suuye lacag badan.Waa meeqa lacagta ad isbaarada ku soo gadatay?$42,000 oo doolar.
War ma isbaaraad ka soo bixisay $42,000 doolar?Haah oo way istaahishaa.See ku isaahishaa?War waxay ku taal (isgoos geed weeynu ku agyaal).Wayna soo celinaysaa lacagtii laga bixiyey.Sheekadaas nin soomaali ah baa ii sheegay.